Manohana akaiky ny tanora ny ONG Madasun sy ny Cnaps - Madagascar Informations
26 décembre 2016 4 janvier 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
Tsy ny tanora ihany fa ny sosialim-bahoaka amin’ny ankapobeny no hiahiany ONG Madasun sy ny Cnaps.
Ankoatra ireo dia jerena manokana ihany koa tontolo ambanivohitra izay kitro tena hifaharany fampandrosoana. Fa ankoatra ireo anisany asa tena hifantohany ihany koa ny fampiroboroboana ny fanatanjahan-tena ka antony nanohanany ny lalao baolina kitra izay notanterahina teto amin’ny kaomina Andranomanelatra sy ny kaomina Mahereza. Tanjona ny hanentanana ny tanora hiditra lalindalina kokoa eo amin’ny tontolony fanatanjahan-tena
Lalao baolina kitra 2 sosona no notanterahina nandritra ny androny 24 desambra izay natao teto amin’ny kaomina Mahereza sy Andranomanelatra. Ho an’ny lalao nifanandrinany ekipan’ny Bemololo sy Andranomanelatra dia savaranon’ando ihany no natao ary mbola hisy ny fanitarana. Hisy ny fanatsarana ho hatao satria tsy vao izao no nisy ny hetsika fitaizana tanora tahaka izao natao teto an-toerana. Hiainga amin’ny kaomina, hiditra amin’ny distrikan’Antsirabe faha 2,ka handraisana anjara kaomina miisa 20 anjara , hitatra any amin’ny faritra Vakinakaratra.
Tratra ny tanjona ho an’ny lalao baolina kitra izay notanterahina teto Andranomanelatra Torak’izay ihany koa ny lalao baolina kitra izay notanterahina teto amin’ny kaomina Mahereza. Raha tsiahivina dia olona tena mpankafy lalao baolina kitra ny Tale Jeneraliny Cnaps Raoul Harizaka Rabekoto. 4 taona nisesy izay no nandrombahany ekipany Cnaps sport ny amboaran’ny Madagasikara , mboa izy ireo ihany koa no nandrombaka ny amboarany Madagasikara teo amin’ny lalao baolina kitra 2016.
← Notolorana ny mariboninahitra ny commandeur de l’ordre Nationale ny pastora Mailhol.
Tsy hafa manoatra amin’ny orinasa vahiny ny orinasa malagasy. →
Facebook : Olona roa no voasambotra ary efa miroso amin’ny fikarohana ireo olona hafa ny Polisy
Drafipandrosoana kaominina Ampitatafika
24 août 2017 Madagascar Informations 0